National Rosé Day: Pemberera neChicago Rosé
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » National Rosé Day: Pemberera neChicago Rosé
Andorra Kupwanya Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • Waini & Midzimu
Latitude Beverage, iyo inovandudza kambani iri kuseri kwenyika zvigadzirwa zvewaini senge 90+ Cellars uye Lila Wines, iri kuunza pati kuChicago chirimo chino neChembera Chicago Rosé, waini yakaganhurirwa yewaini yekumwa mwaka wese.
Pemberera Chicago Rosé yakasikwa nemazhizha echadiki eChicago mupfungwa, kutanga nezita rinoshamisira richidada kuratidza mavara eguta uye chiratidzo cheedenga. Iyi waini isanganisa yechinyakare yekuFrance musanganiswa weGrenache, Syrah, Cinsault uye Mourvedre vekuLanguedoc, France. Iyo inotapira, inozorodza, yakaoma uye ine muchero nezvinonhuwira zvemutsva sitirobheri uye tsvuku macheri. Pair iyo ine yakadzika dhiza pizza, yeChicago-dhizaini hotdogs uye nehusimbe mazuva achigara padivi pegungwa.
"Chicago inobata nzvimbo yakakosha mumoyo yedu," akadaro Kevin Mehra, CEO, Latitude Beverage. “Takagamuchirwa neushamwari pakati pekumadokero patakawedzera bhizinesi redu kupfuura New England makore gumi apfuura, ichiita Chicago imwe yemisika yedu yekutanga. Kungofanana neRosé yedu yegore negore paMvura inofamba ichitenderedza Lake Michigan, waini iyi inopemberera zhizha muChicago apo guta racho riri kunyatsotumbuka. ”
Kwete chete iyo Kupemberera Chicago Rosé kunakidzwa neChicagoans, ichaitira zvakanaka nharaunda yemuno, futi. Dhora rimwe chete kubva kubhodhoro rega rega rinotengeswa richaenda kuGreater Chicago Food Depository, nhengo yeFeeding America iyo inogovera zvakaenzana nezvikafu gumi nezvishanu nemakumi mashanu nezviuru kudunhu reCook County mazuva ese. Kutengeswa kweiyo rozi yemwaka uno kunofungidzirwa kuti kunogadzira ingangoita zviuru gumi zvemadhora zveiyo Chikafu Chekuchengetedza.
"Tinotenda zvikuru kune vamwe vedu vakaita se90+ Cellars vanotibatsira kuti Chicago ive nani," akadaro Kate Maehr, director director weGreater Chicago Food Depository. "Rutsigiro urwu runoshandura kuita chikafu chine hutano uye nharaunda dzinofara kune vese."
Tsvaga Pemberera Chicago Rosé muzvitoro zvaMariano, pamwe nevamwe vazhinji vatengesi vewaini munzvimbo yeChicago. Waini ine SRP yemadhora 14.99 uye iri pano munguva chaiyo yeNational Rosé Day musi weMugovera, June 8.